सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति ? | समाचार
June 24, 2021 June 24, 2021 NepstokLeaveaComment on सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति ?
काठमाडौं, १० असार । बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ भने चाँदीको मुल्य स्थिर छ । आज छापावाला सुन तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुन पनि तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ९० हजार रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज चाँदीको मुल्य भने स्थिर छ । चाँदी प्रतितोला १ हजार २ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
असार लागे पछि निरन्तर ओरालो लागेको सुनचाँदीको मुल्य ७ गते सोमबार र मंगलबार भने उकालो लागेको थियो । असार १ गते मंगलबार छापावाला सुन प्रतितोला ९३ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला १ सय रुपैयाँ घटेर ९३ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै बिहिबार छापावाला सुन एकैचोटी तोलामा ११ सय रुपैयाँ घटेर कारोबार भएको थियो भने शुक्रबार तोलामा १२ सय रुपैयाँ घटेर कारोबार भएको थियो ।
आइतबार नेपाली बजारमा तोलामा ८ सय रुपैयाँ घटेर कारोबार भएको थियो भने सोमबार ४ सय रुपैयाँ बढेर कारोबार भएको थियो । मंगलबार पनि तोलामा ६ सय रुपैयाँ बढेर कारोबार भएको थियो । बुधबार असार ९ गते भने तोलामा ३ सय रुपैयाँ घटेर कारोबार भएका थियो । आज बिहिबार पनि सुनको मुल्य घटेर कारोबार भैरहेको छ । आज सुन तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेको छ । भने चाँदी स्थिर छ ।